Izindatshana zikaJosie Scotchmer ku Martech Zone |
Imibhalo nge UJosie Scotchmer
UJosie Scotchmer uyiMenenja Yezentengiso kwa Imeyilijet, ukumaketha kwe-imeyili Nesikhulumi se-imeyili sokuthengiselana. UJosie uyi-B2B2C Marketing Manager ethandekayo enendlela yezentengiselwano kwezokumaketha ukuxhumana.
I-Social's Media's Road to Longevity ngaphansi kwe-GDPR
NgoMgqibelo, Okthoba 28, 2017 NgoMgqibelo, Okthoba 28, 2017 UJosie Scotchmer
Chitha usuku uhamba uzungeza iLondon, New York, Paris noma iBarcelona, ​​empeleni, noma yiliphi idolobha, futhi uzoba nesizathu sokukholelwa ukuthi uma ungabelananga ngalo nabezindaba zenhlalo, akwenzekanga. Kodwa-ke, abathengi base-UK naseFrance manje sebekhuluma ngekusasa elihlukile lezokuxhumana ngokuphelele. Ucwaningo luveza amathemba amabi eziteshi zokuxhumana njengoba bangu-14% kuphela abathengi abanesiqiniseko sokuthi uSpapchat usazoqhubeka abe khona eminyakeni eyishumi.